Ogaden News Agency (ONA) – Shacabka & Siyaasiyiinta Itoobiya oo Kajawaabay Magacowgii Abiye Axmed.
Shacabka & Siyaasiyiinta Itoobiya oo Kajawaabay Magacowgii Abiye Axmed.
Posted by Dulmane	/ March 29, 2018
Kadib markii kooxda sheegata in ay wadanka maamusho ee EPRDF ay sheegeen in ay Raysal-wasaaraha cusub ee wadanka udoorteen Dr. Abiye Axmed oo dhalasho ahaan kasoo jeeda qabiilka qoomiyadaha Itoobiya ugu badan ee Oromada, ayaa waxaa siwayn uga falceliyay dad shacab ah oo aad ubadan iyo waliba siyaasiyiin caan ah.
Kooxda magac uyaalka ah ee EPRDF ayaa goordambe oo habeenimadii Arbacada ah soo saartay hadalka sheegaya in ay gudoomiyaha Urur kusheega EPRDF udoorteen Abiye Axmed oo ah in aan siyaasada kucusbayn oo udhashay qoomiyada Oromada.
Dhawaaqa kooxda kadib waxaa siwayn uga falceliyay qaar kamid ah siyaasiyiinta iyo shacabka Oromada, waxayna inta badan isku raaceen in aysan waxba sookordhin doonin doorashada Mr. Axmed, waxayna qaar shacabka kamid ah sheegeen in uu Abiye Axmed yahay Tigree af-oromada bartay, taas oo micnaheedu yahay in uu yahay shakhsi meesha lagaystay.
Dr Bekele Gerba oo ah gudoomiye kuxigeenka xisbiga OFC ayaa dhankiisa sheegay in waxa meesha kadhacay uu ahaa wax shacabka lagu khayaamaynayo, isla markaana loobaahan yahay in doorasho xor iyo xalaal ah laqabto shacabkuna ay doortaan qofka ay doonayaan.
Siyaasiyiinta iyo shacabka qoomiyada Axmaarada ayaa sidoo kale jawaab kabixiyay magacowga Abiye Axmed, kaas oo ay sheegeen in uu siikordhiyay uu aqabadihii jiray ee ladoonayay in laga bogsado.
Dadka kahadlay magacowga Mr. Axmed ayaa dhamaantood sheegay in loobaahan yahay isbadal dhab ah oo kuyimaada hay’adaha xukuumada wayaanaha, sida in ladhimo awooda ciidamada iyo in labadalo hogaaminta ciidamada, iyo waliba lawadaago awooda hoose iyo tasare ee wadanka.
Sidoo kale dadka hadlay ayaa sheegay in maxaabiista lasiidaayo iyo waliba in golaha wasiirada si isu dheeli tiran looqaybsado, taas oo aan laga yaabanayn in ay kadhacdo wadanka gumaysiga Itoobiya.